Soo-saareyaasha Magnet-ka Dahaarka ah ee Rubber-saareyaasha & Alaab-qeybiyeyaasha - Shiinaha Warshad Maroosyada Dahaarka leh
Buundadan xoogan ee magnet-ka ah waxay ku haboon tahay qoryaha, qoryaha fudud, bistooladaha, rogayaasha, qoryaha, iyo qoryaha noocyada oo dhan si loogu qariyo guriga ama difaaca gaariga, ama bandhigyada. Way fududahay in la rakibo si aad u dejiso meel kasta oo aan dhib lahayn!
Buurta Magnetic Gun oo leh Dahaarka Rubber
Buundadan xoogan ee magnet-ka ah waxay ku haboon tahay qoryaha, qoryaha fudud, bistooladaha, rogayaasha, qoryaha, iyo qoryaha noocyada oo dhan si loogu qariyo guriga ama difaaca gaariga, ama bandhigyada. Daabacaadda astaantaada sare ayaa halkan laga heli karaa.
Rubber daboolay Magnetic Base Mount Bracket for Car LED Meeleynta
Qeybtan birlabta ee birlabta waxaa loogu talagalay saqafka sare ee korontada LED haynta iyo dejinta. Daboolka caagga ah ee la daboolay ayaa ah fikrad ah in rinjiyeynta gaariga laga ilaaliyo dhaawac.
Magnet Rubber Pot with Handle
Magnet-ka adag ee Neodymium waxaa lagu dhejiyaa daahan caag ah oo tayo sare leh, kaas oo hubiya meel dusha lagala xiriiro oo aamin ah markaad codsaneysid calaamadeeyaha magnetic-ka ee gawaarida iwm. Loogu talagalay oo leh gacan-qabsi dheer oo dusha sare lagu dhejiyay, taasoo siineysa isticmaale-baaxad dheeri ah marka la dhigayo badanaa vinyl warbaahinta.
Rektangluar Rubber-ku-saleysan Magnet
Magnet-yahan la daboolay ee cinjirka ah ee qaab-dhismeedka ah ayaa ah birlab aad u xoog badan oo ku qalabaysan hal ama laba dun oo gudaha ah. Magnet-ka dahaarka leh ee caagga ah ayaa gebi ahaanba laga soo saaray waxyaabo tayo sare leh sidaa darteedna hubinaya wax soo saar adag oo waara. Magnet caag ah oo leh laba dun ayaa laga soo saaray darajada N48 si loogu helo awood dheeri ah
Magnet Rubber Pot oo leh Mawjadda Dibadda
Mawjadaha dheriga cinjirka ah waxay si gaar ah ugu habboon yihiin walxaha magnetically go'an walxaha dunta dibedda ah sida bandhigyada xayeysiinta ama daboolida badbaadada saqafyada baabuurta. Cinjirka kore wuxuu ka ilaalin karaa magnetka gudihiisa waxyeelo iyo miridh-caddeyn.
Rubber Pot Magnet oo leh Flat Screw
Isku soo wada duub oo magnet gudaha ah iyo banaanka daahan caag ah, noocan ah magnet dheriga ayaa ku haboon isticmaalka meelaha dusha laga mariyo oo aan la xoqin .Waxay ka dhigeysaa isticmaalkeeda in lagu taliyo maqaallada la rinjiyeeyay ama la xardhay, ama codsiyada halka awood xoog leh ay tahay. loo baahan yahay, iyada oo aan la calaamadin
Rubber Magnet Dahaarka leh Dunta Dumarka
Kuwani magnet dheriga daahan caag ah neodymium wuxuu ku habboon yahay hagaajinta bandhigyada dusha sare ee biraha. Calaamado kuma reebayso dusha mawduuca xiisaha leh oo muujinaya qaab wanaagsan oo ka-hortagga daxalka u isticmaalka dibadda.